ခွေးရူးပြန်ရောဂါ သည် ကျည်ဆန်ထိပ်ဖူးပုံရှိသည့် ရပ်ဘဒိုဗီရီဒေး ခေါ် ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားရပြီး ခရစ်တော်မပေါ်မီ ၂၃၀၀ ခုနှစ်ခန့်မှ စတင်၍ ကမ္ဘာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခွေးရူးရောဂါဟုလည်းခေါ်ဆိုကြသည်။ ၎င်းရောဂါသည် ခွေးတွင် မူလဖြစ်ပေါ်၍ ထိုခွေးမှ တစ်ဆင့် အခြားတိရစ္ဆာန်နှင့် လူတို့သို့ ကူးစက်ပြန့်ပွား တတ်သည်။ ခွေးရူးနာစွဲကပ်သော တိရစ္ဆာန် သို့မဟုတ် လူ၏ အာရုံကြောဆဲလ်များတွင် နက်ဂရီဗောဒီကို အစဉ်တွေ့ရ၏။ နက်ဂရီ ဗောဒီဟု ခေါ်ခြင်းသည် နက်ဂရီအမည်ရှိ သူတစ်ဦးက စတင် တွေ့ရှိသောကြောင့် ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်ကို အစွဲပြု၍ခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုနက်ဂရီဗောဒီသည် အလွန်သေးငယ်သည့် ဗိုင်းရပ်များဖြစ်၍ အခြားရောဂါမျိုးတွင် မတွေ့ရချေ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကမ္ဘာတွင် ခွေးရူးပြန်ရောဂါကြောင့် ၁၅ မိနစ်လျှင် လူတစ်ဦးနှုန်းသေဆုံးလျက်ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် လူ ၅၅၀၀၀ အသက်ဆုံးရှုံးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းအနက် ၃၁၀၀၀ မှာ အာရှဒေသမှဖြစ်ပြီး အာဖရိကမှ လူ ၂၄၀၀၀ ခွေးရူးရောဂါဖြစ်ပွား၍ အသက်ဆုံးရှုံးလျက်ရှိသည်။
4. လူတွင်ဖြစ်ပေါ်သော လက္ခဏာ
5. ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့် ခွေးရူးပြန်ရောဂါ
ကမ္ဘာတွင် ဩစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့မှအပ အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင် ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများတွင်ပင် ခွေးရူးရောဂါဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ပင် တစ်နှစ်လျှင် လူ ၄၀၀၀၀ခန့် ခွေးရူးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ဆေးကုသမှု ခံယူလျက်ရှိသည်။ အာရှတွင်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံတို့တွင် နှစ်စဉ်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့် တိရစ္ဆာန်နှင့် လူများတွင် ဖြစ်ပွားစေသော ခွေးရူးရောဂါကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ အရှေ့တောင်အာရှတွင် ခွေးရူးရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပက်သက်၍ အမျိုးသားအဆင့် ခွေးရူးရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေး စီမံကိန်းများကို မလေးရှားနိုင်ငံ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အမျိုးသားအဆင့် စီမံကိန်းကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှစ၍လည်းကောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် လည်းကောင်း ရေးဆွဲခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခွေးရူးရောဂါကို ၁၉၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းများအရ သိရှိခဲ့ရသည်။ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းမှ ခွေးရူးရောဂါစူးစမ်းရှာဖွေမှု၊ အတည်ပြုမှု ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။နှစ်စဉ် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် ကိုကမ္ဘာခွေးရူးပြန်ရောဂါနေ့World Rabies Day အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၏ ဆောင်ပုဒ်မှာ"ခွေးရူးရောဂါအဆုံးသတ်ရေးကာကွယ်ဆေးထိုးကာ ပူးပေါင်းပေး"End Rabies: Collaborate,Vaccinate ဖြစ်ပါသည်။
6. မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ခွေးရူးပြန်ရောဂါ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၈ က ခွေးကိုက်ခံရမှု တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် တစ်သိန်းကိုးသောင်းကျော် ရှိသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လအထိ လူ ၆၀,၀၀၀ ခန့် ခွေးကိုက်ခံရသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ခွေးရူးပြန်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၆၉ ဦးရှိသည်။ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ တွက်ချက်မှုအရ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ခွေးအကောင်ရေ ၃.၈ သန်း ရှိကာ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ခွေးလေခွေးလွင့်များ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်သော စစ်တမ်းတစ်ခုအရ ခွေးနှစ်ကောင်လျှင် တစ်ကောင်သည် ခွေးရူးရောဂါရှိနိုင်သည်ဟု သိရသည်။